Hupenyu hwekunyepa hwevakuru, chokwadi chinokanganisa manzwiro | Zvazvino Zvinyorwa
MunaGunyana 2020 munyori weItari Elena Ferrante akaburitsa bhuku rake Hupenyu hwekunyepa hwevakuru, ichiva budiriro yemupepeti isingarambike. Zvakare, chokwadi chekusaziva kuti munyori ndiani - chakamupa kusazivikanwa - chinoita kuti riwaya riite serinokwezva kuruzhinji. Mupfungwa iyi, inyaya yekuwanikwa kunoitwa nemusikana nezve tsika dzakavanzika dzevakuru.
Pasi peiyi nharo, isu tinopupurira nyaya yemakakatanwa angangoitika akatangira mukuyaruka nekuda kwekuzarurwa kwechokwadi chinokanganisa manzwiro. Saka, murondedzeri, Giovanna, anorondedzera zvaakasangana nazvo mumunhu wekutanga uye anogutsikana, pasina zvirahwe, muverengi nezvezviitiko. Panguva imwecheteyo, rudzi rwekuomarara nekubatana kunoitwa kune protagonist.
1 Nezve munyori, Elena Ferrante
1.1 Elena Ferrante, chigadzirwa chemabhuku ake
1.2 Anoda kusvika makumi matatu emakore ezvinyorwa
2 Mhedziso yeiyo Inoreva Hupenyu Hwevakuru
2.1 Kutanga nzira
2.2 Zvakavanzika zvemhuri
2.3 Mabhuku senzira yekupindura
3 Ongororo pfupi yebhuku rinonzi Lying Life of Adults
3.1 Musoro webhuku
3.1.1 Kutsvaga kwetariro uye ruzivo
3.2 Chimiro chinokunda vaverengi
Nezve munyori, Elena Ferrante
Chirevo chisingazivikanwe chemunyori ichi chisingadzivisike nguva dzose kubvira pakaburitswa bhuku rake rekutanga makore makumi matatu apfuura. Zvakanaka, Parizvino, kuzivikanwa kwemunyori hakuna chokwadi, kupfuura kubvunzurudzwa neemail. Zvinongozivikanwa chete kuti - zvinofungidzirwa - akazvarwa muna 1943 muNaples, Italy uye kuti Elena Ferrante izita rekunyepedzera.
Nezvikonzero izvi, pane kungofungidzira nezve iye munyori. Uyezve, vamwe vevaverengi vake vanodavira kuti zvinyorwa zvake zvifananidzo zvehupenyu. Saizvozvo, chinyorwa chitsva chega chega chave kuchiperekedzwa nedzidziso uye nekutsvaga kuti uone kuti Elena Ferrante ndiani chaizvo. Naizvozvo, zvakajairika nhoroondo yehupenyu nezvemunyori anozivikanwa nezvinyorwa zvake.
Elena Ferrante, chigadzirwa chemabhuku ake
Iyi kesi haisi yekutanga yemunyori weItari anosarudza kuramba asingazivikanwe. Asi, icho chisina mubvunzo ndechekuti, sekureva kweiyo Amazon portal, mukadzi uyu ndiye "chirevo chikuru muzvinyorwa zvazvino." Ipapo ipapo, zvinonzi "zvinonakidza zviuru makumi maviri makumi maviri zvevaverengi munyika makumi mana nepfumbamwe" pasi rose. Pamusoro pe, Hupenyu hwekunyepa hwevakuru nderimwe remabhuku zana akanakisa akasarudzwa nemagazini nguva.
Nekudaro, iye munyori chaiye kusvika sezvo mabhuku ake aripo. Sezvinei, Elena Ferrante (kana chero waari chaizvo) munyori nekuti zvinyorwa zvake (pamusoro pezvose) zvinomupa hupenyu hweveruzhinji. Zvino, zvinogona kutaurwa kuti zvinyorwa zvake zvinoumba seti yezvinyorwa zvechokwadi zvine chekuita nemusiki wezvinyorwa.
Anoda kusvika makumi matatu emakore ezvinyorwa
Zvinozivikanwa kuti Elena Ferrante akazove nemukurumbira muEurope yose muna 2011 paakatanga kutsikisa kumashure kwemabhuku mana. Yeyekupedzisira, inozivikanwa se Shamwari mbiri, yechina novel yakabuda muna 2015 (muchiSpanish) ine kugamuchirwa kwakakurumbira. Iye zvino yako bhuku rekutanga rakange riri muchiItaly muna 1992, Zvinogumbura rudo, kuti idzokezve muna 2002 Mazuva ekusiiwa.
Gare gare, akaburitsa Rima mwanasikana (2006), inoverengeka ine rondedzero ine simba uye mavara asinganzwisisike, kwaakaratidza zviratidzo zvekushanduka kwekunyora kunoshamisa. Mushure, sezvambotaurwa, Akaburitsa yake yekugadza tetralogy pakati pa2011 na2015. Pakupedzisira, nekutanga kwe Hupenyu hwekunyepa hwevakuru (2020), Elena Ferrante akazvisimbisa seakakura zvinyorwa.
Zvinyorwa zve Hupenyu hwekunyepa hwevakuru
Mune ino novel naElena Ferrante, Semwana mudiki, Giovanna anoona kufa kwemanyepo mumusoro wake werudo, wevabereki vake. Izvi zvinoitika kana achinzwa baba vake vachitaura (asingazvizive) kune huipi hwemwanasikana wake. Nenzira iyi, musikana anofanirwa kutarisana nechinhu chitsva, icho chaanonzwisisa kuti vanhu vakuru vanonyepa sei, kunyangwe kune vepedyo.
Sezvineiwo, musikana mudiki anokanganiswa nenhema uye hunhu hwemhuri yake (nhengo yeNeapolitan bourgeoisie yema1990). Saka Giovanna anoyeuka kuti baba vake vakati "akashata sababamunini vake Vittoria", mumwe munhu waakange asingazive nezvake.
Nekudaro, anotanga kutsvaga mainini ava uye kufungira mhuri yake kusvikira asangana naVittoria, ane hupfumi hwakaderera. Zvishoma nezvishoma Giovanna anonzwisisa kuti amainini vake mukadzi akabatwa ane hupenyu hweshungu, akasiyana zvakanyanya nehupenyu hwezuva nezuva hwevabereki vake, vakangwara uye bourgeoisie.
Mabhuku senzira yekupindura
Nekuda kwemamiriro ezvinhu akatsanangurwa mundima dzapfuura, Giovanna (anogara achiverenga) anozvinyudza mumabhuku. Pamusoro pe, wechidiki anopinza kukosha kwekudzidza uye dzidzo mune zvese. Muchirevo ichi, Roberto anoonekwa, mudzidzisi anomukurudzira kuti agare achitsvaga kudzidza kutsva uye kumisa tarisiro yakakwira pamusoro pake.
Nenzira iyi, rondedzero yacho inoenderera - inovhara nguva ingangoita makore mana - pamwe nedzimwe nyaya diki dzinoenderana nenyaya yepakati. Nechekare kusvika kumagumo Hupenyu hwekunyepa hwevakuru, chokwadi chemusikana chinova "kusahadzika kunodiwa." Panguva ino, hapana chinotaurwa uye chakakosha chinhu kuwana ruzivo rutsva pasina zviyero kana kudzvinyirira.
Hupenyu hwekunyepa hwe ...
Ongororo pfupi yebhuku Hupenyu hwekunyepa hwevakuru
Mune ino nyowani nyowani yaElena Ferrante pane akati wandei madingindira akapindirana mukuvandudza kwezviitiko. Pakati penyaya idzi, mazhinji anotarisana nerudo uye kunyepa. Eheka, rudo ndirwo dingindira renyika dzese, asi munyori anozviswededza kuburikidza nemuyaruka anowana iro rakanaka nerakaipa.
Kutsvaga kwetariro uye ruzivo
Hupenyu hwekunyepa hwevakuru inorondedzera kupunzika kwechakanaka chehunhu hwekunaka muGiovanna, mutambi, nekuda kwekunyepa kunokuvadza. Nekudaro, uyu wechidiki, akatarisana nekuwanikwa kwekunyepedzera kuri padyo, anoona nzira yekubuda kunotsvaga chokwadi ... tariro inova nyaya inosarudza.
Sezvineiwo, protagonist inosangana nemakakatanwa akakosha, akakosha mukukura kwemanzwiro emusikana mune yakatsiga danho. Iyo psyche yemukadzi Giovanna inoenderana zvakanyanya nezve izvo-zvega-zvekutsvaga uye iwo manzwiro. Ndiani zvakare anosvika zvimwe zvakazarurwa nezve kukosha kwechitarisiko chevanhu.
Chimiro chinokunda vaverengi
Kubudirira kwe Hupenyu hwekunyepa hwevakuru Hazvisi mukuvanzika kwekuzivikanwa kwemunyori. Mune mamwe mazwi, hazvina kunaka kusatomboziva hunhu hwemabhuku aElena Ferrante. Saizvozvo, zvakakosha kuti zvijekese izvozvo ndiwo mutoo unopinza werondedzero yemunhu wekutanga uyo uri kunyatsoita muvaverengi.
Naizvozvo, rondedzero inotaurwa nezwi reprotagonist inoratidzira mhedzisiro yepedyo, iyo inotumira humbowo hwemusikana hwechokwadi. Muchokwadi, iyo nyaya painongotanga chete, vaverengi vanowanzoita sekunzwa kuzivikanwa mairi uye vanoda kuperekedza mukuitsvaga kwayo kusvika kumagumo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Hupenyu hwekunyepa hwevakuru